Akwukwo nke Synephrine (94-07-5) hplc =98% | AASraw Fat Loss ntụ ntụ
/ ngwaahịa / Ọla abụba / Synephrine ntụ ntụ
Rating: SKU: 94-07-5. Category: Ọla abụba
AASraw nwere ikikere na mmepụta site na gram ka usoro nchịkọta nke Synephrine ntụ ntụ (94-07-5), n'okpuru usoro CGMP na usoro nchịkwa mma.
Synephrine ntụ ntụ video
Raw Synephrine ntụ ntụ bụ isi Characters
aha: Synephrine ntụ ntụ
Usoro Molecular: C9H13NO2
Molekụla arọ: 167.21
Raw Synephrine ntụ ntụ na steroid usoro
Synephrine ntụ ntụ bụ alkaloid a na-ahụkarị nke na-ewere dị ka ihe na-akpali akpali na nootropic n'ihi na ọ na-emetụta ọnwụ nha na usoro ntụgharị uche na ụbụrụ. Dị ka o kwesịrị, a na-ahụ ntụ ntụ Synephrine na ụfọdụ osisi na anụmanụ, ọkachasị ọtụtụ ntụ ntụ Synephrine dị na mgbakwunye nri ka ewepụtara ma mepụta site na Citrus Aurantium Plant nke a na-akpọkarị Bitter Orange wepụ.
Raw Synephrine ntụ ntụ Usage
Iji nweta uru nke metabolic na ike nke Synephrine ntụ ntụ, ọ kachasị mma iwere ihe mbụ n'ụtụtụ ma ọ bụ 15 - 30 nkeji tupu mmega ahụ. Ekwesịrị ị takenụga mgbatị na mgbatị ahụ nwere Synephrine ntụ ntụ na mmiri tupu emega ahụ. Dosedị kachasị dị irè bụ 15 - 25 milligrams kwa otu.
Kedu Ụdị Nsonaazụ M Kwesịrị Ịmanya Anya na Ụdị Synephrine
Dị ka ihe mgbakwunye niile nke anụ ahụ, adịghị atụ anya atụ ndị na-enweghị atụ na Synephrine ntụ ntụ.
Cheta na ihe mgbakwunye anaghị ewuli nnukwu physiques. Ịrara onwe gị nye ọzụzụ kwesịrị ekwesị.
Nke ahụ kwuru, nke a bụ ihe ị nwere ike ịtụ anya site na Synephrine ntụ ntụ supplementation:
Obere mmụba na ọnụego basala gị.
Mbelata ntakịrị na ọrụ nke ndị na-anabata abụba abụba na-egbochi nchịkọta anụ.
Ọganihu dị ntakịrị na mmetụta okpomọkụ nke nri, ma ọ bụ 'ume' nke na-eme nri.
Ọ bụrụ na nke ahụ anaghị ada ụda niile dị na gị, m ghọtara. Ana m akpọ ya ka ọ dị.
Nke ahụ kwuru, ọ pụtaghị na ị ekwesịghị ịgbakwunye na syneprhine. Ihe ọ pụtara bụ na ị gaghị etinye naanị na Synephrine ntụ ntụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta mmezi.
A pụkwara ikwu otu ihe banyere ọtụtụ ihe mgbakwunye anụ ahụ.
Site na onwe ha, n'otu n'otu, ha na-aba ụda. Kedu ihe ndị ziri ezi ọnụ, Otú ọ dị, mmetụta ndị na-emetụta ọnụ nwere ike ịghọ ihe a na-ahụ anya.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na i jikọrọ synephrine ntụ ntụ na naringin na hesperidin, ị nwere ike okpukpu okpukpu abụọ nke mmelite nke metabolic. Ma ọ bụrụ na ị gbakwunye caffeine, mmetụta ahụ ga-adịkwu ọbụna karị.
N'ihe gbasara ezigbo ihe ọfụma, ọ bụrụ na i were ihe anọ a kwa ụbọchị (na karịsịa tupu ị rụọ ọrụ), ọ bụ ihe ezi uche dị na ya itinye 0.5 pound nke abụba abụba kwa izu.
Ma nke ahụ dị oke mkpa ma ọ bụrụ na ị na-azụkwa ike ma na-eri nri.
(Ekwesịrị m ịkọwa na ị nwere ike idaba abụba na isi abụba-karịsịa ngwa ngwa mgbe itinyekwuru yohimbine n'ime mix.)
Ịdọ aka ná ntị na ụfe Synephrine ntụ ntụ
E wezụga ike igbochi agụụ, Synephrine ntụ ntụ na-egosi efu ihe akaebe nke inwe ike ire abụba n'onwe ya. Ya mere, a gaghị ewere ntụ ntụ Synephrine dị ka ihe na-ere ọkụ. Site n'iji Synephrine ntụ ntụ na-eji abụba na-ere ọkụ, ị ga-eche na a gaghị anwa gị ọnwụnwa iri nri n'ụbọchị gị ka ị ga-anọgide na-ejupụta ogologo oge ma nwee ọchichọ ịchọrọ iri karịa ihe ị na-eme kwa ụbọchị.
Naanị n'ihi na ọ bụ mmeju na ahịa apụtaghị na ị ga-ewere ya n'agbanyeghị. Synephrine ntụ ntụ ka na-anwale ma nyocha ụfọdụ na-egosi na mgbe e meriri ya, ọ nwere ike inwe mmetụta ndị nwere ike ịnweta, dịka isi ọwụwa, ọgbụgbọ, na obi mgbawa. Ọ dị mma iji dọọ aka ná ntị na ebe ọ bụ na a na-atụle ntụpọ Synephrine ka ọ bụrụ ihe na-akpali akpali, na ndị nwere ma ọ bụ ndị nwere nsogbu ọbara mgbali elu, nwere akụkọ ihe mere eme nke ezinụlọ nke ọrịa obi ma ọ bụ ọbụna nwere ọrịa strok, na ị ga-ezere iwepụta ngwaahịa a ọ nwere ike ibute mmụba n'ihe ize ndụ n'ihi na ọ na-ebuli elu obi.
Ya mere, ajụjụ bụ isi, ị ga-ewere Syneprhine? N'ụzọ ziri ezi, ọ gwụla ma ị na-eji ya na-agwọ ọrịa ọrịa anụ, anaghị m ahụ ihe kpatara onye kwesịrị iji tinye mgbakwụnye a. Ọ bụrụ na onye dọkịta agwaghị gị ka ị gaa synpehrine, na-ezere ya dị ka ihe ize ndụ ndị dị oke elu na-atụle ụgwọ ọrụ ọ ga-enye gị. Ọ bụ ezie na apụghị m ịgwa gị ihe ị kwesịrị na ekwesịghị ikwe, ekwenyesiri m ike na site n'iji ngwaahịa a ma ọ bụrụ na ị gwaghị gị ihe, na ị nwere ike mechaa mebie ahụ gị karịa ihe ọma.
Ọ bụrụ na ị jikọọ na Intaneti maka azịza, ị ga-ahụ ịdọ aka ná ntị dị njọ nke na ntụpọ Synephrine nwere ike ime ka ihe ize ndụ maka ọbara mgbali elu, nkụda mmụọ, nkụchi obi, ọrịa strok, na 'nsogbu ndị ọzọ dị egwu.'
Ọfọn, ọtụtụ ọmụmụ egosiwo na ntụ ntụ Synephrine adịghị eme ka ọbara mgbali elu, nchọpụta na-egosikwa na ọ na-adịkarị mma ma dịrị mma.
Eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị dị ka ọtụtụ mmadụ, ị gaghị achọpụta ọtụtụ ihe mgbe ị na-ewere ntụ ntụ Synephrine Ọtụtụ na-akọ ntakịrị mmụba nke ike na-enweghị nke ọ bụla na-emetụta ihe na-akpali akpali (jitters, ọgbụgbọ, obi mgbawa ngwa ngwa, wdg) ).
Nke ahụ kwuru, ọ bụrụ na ị nwere ọnọdụ ahụike ọ bụla ma ọ bụ were ọgwụ ọ bụla nwere ike ime ka mgbakwunye na Synephrine ntụ ntụ, gwa dọkịta gị tupu i jiri ya mee ihe. Ihe atụ bụ ọbara mgbali elu, ndị na-egbochi ọrịa, na HIV / AIDS.
Synephrine ntụ ntụ, ma ọ bụ dị ka ọ maara nke ọma, Orange na-egbuke egbuke, bụ osisi nke akwukwo, mkpụrụ osisi na ihe ọṅụṅụ mkpụrụ osisi na-ewe ihe ubi ma jiri ya mee ọgwụ na peel n'onwe ya iji mee mmanụ. A pụrụ itinye mmanụ mmanụ oroma mmanụ n'ahụ akpụkpọ ahụ iji nyere aka n'ịgwọ ọrịa, dị ka ndị na-agba ụda na ndị na-eme egwuregwu na-agba ụkwụ.
Ọ bụ ezie na a ka na-eduzi ọtụtụ ọmụmụ, enwerekwa ihe àmà zuru oke iji gosipụta na mgbe mmadụ na-ericha mmanụ ocha bara oke, ọ nwere ike ịkwụsị agụụ. Nke a bụ ebe Synephrine ntụ ntụ na-egosi ihe ịrịba ama nke ụkọ ọnwụ n'etiti ndị ọrụ dịka ọ na-emepụta mmetụta na-adịgide adịgide n'ime ahụ iji mee ka onye na-eri ya nwee mmetụta zuru oke ruo ogologo oge ma belata ọnwụnwa ọ bụla maka ọchịchọ ma ọ bụ ọchịchọ ịṅụ nri ọzọ. Site n'iji obere nri, ị na-eri obere calorie, nke n'aka nke ya, na-ebute ọnwụ dị arọ maka oge.
Powder Powder Synephrine
Raw Synephrine ntụ ntụ Marketing
Otu esi zụta Synephrine ntụ ntụ si AASraw
1.Jaa kpọtụrụ anyị site na usoro ịjụ ajụjụ email, ma ọ bụ onye na-ahụ maka ọrụ ahịa skype (CSR).
Powumethasone acid ntụ ntụ (28416-82-2)
6-Dehydronandrolone acetate ntụ ntụ (2590-41-2)